तीन ओटा कम्पनीको हकप्रद शेयर आउने तयारीमा, कुन-कुन कम्पनीको कति कित्ता आउँदै ?
फागुन २४, काठमाडौं । तीन ओटा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका छन् । अपि पावर कम्पनी, कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंक र अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेका हुन् ।
यी तीन ओटै कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएका छन् । तीन ओटा कम्पनीले कुल १ करोड ३९ लाख ११ हजार १९७ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि सेबोनमा निवेदन दिएका हुन् ।
अपि पावर कम्पनीले १ बराबर शून्य दशमलव २९३८ अनुपातमा रू. एक सय अंकित दरको ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न फागुन ९ गते निवेदन दिएको हो । हाल कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रू. २८६ रहेको छ ।
त्यसैगरी, कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंकले १ बराबर १ दशमलव ५ को अनुपातमा ३० लाख कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि सेबोनमा पुस २६ गते निवेदन दिएको छ । हाल दोस्रो बजारमा कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ६६९ पुगेको छ ।
अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले १ बराबर शून्य दशमलव ५ अनुपातमा ५२ लाख ४१ हजार १९७ कित्ता हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नका लागि असोज २१ गते निवेदन दिएको हो । यस कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३४५ रहेको छ । यी तीन ओटै कम्पनीले गर्न बोर्डको अनुमति पाएपछि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछन् ।
तलकोे टेबलमा हकप्रद शेयर, कम्पनीहरुको हाल कायम रहेको चुक्तापूँजी र हकप्रद शेयर निष्कासन पछि कायम हुने चुक्तापूँजी देखाइएको छ ।